Kris Pauell - मानव को अपार सम्भावनाहरू
यसलाई वजन एउटा उत्कृष्ट तरिका शारीरिक गतिविधि छ कि ज्ञात गरिएको छ। वर्तमानमा, थप र थप प्रशंसक एक अमेरिकी फिटनेस रूपमा, यो खेल मा हुन्छन्। यसको निर्माता र वर्तमान वजन मान्छे को धेरै गुमाउन मद्दत छ जो िईद्भस Pauell, एक सक्रिय प्रयोगकर्ता हुन मानिन्छ।
आज यो एक किशोरी धेरै, सानो लोड फुटबल सामना गर्न असमर्थ छ रूपमा कोच ज्ञात गरिएको छ कि अविश्वसनीय देखिन्छ। तर यो खेल धेरै िईद्भस Pauell जस्तै खेल्न। उसले आफ्नो टाउको मा sunk संग, आफ्नो शरीर उठाए किन हो भारोत्तोलन। क्रिस केही महिनामा सिक्न छैन भएको छ। उहाँले क्षेत्र मा reappeared, त्यो जीत गर्न थाले। र यो साँच्चै गरेनन् जो आकार मा लाभ, को खर्च मा गरेनन् र कारण ठूलो शक्ति र बल देखियो।
आफ्नै कमजोरी माथि यो विजय उसलाई शरीर को कसरी अपार सम्भावनाहरू देखाए। यो घटना आज भन्दा मनपर्ने र लोकप्रिय अमेरिकी फिटनेस प्रशिक्षक छ भन्ने तथ्यलाई गर्न अन्ततः नेतृत्व।
एक वयस्क बनेर, क्रिस बिहान कार्यक्रम "शुभ प्रभात एरिजोना" आत्म-सुधार मा एक विशेषज्ञ रूपमा भाग लिए। प्रत्यक्ष मद्दत लागि कोच आग्रह गर्ने दाऊदले स्मिथ, एक फोन कल प्राप्त। यसको वजन 285 किलो थियो, त्यसैले डाक्टर उसलाई जीवनको मात्र4वर्ष प्रतिज्ञा गरेका छन्। एक समय पछि, क्रिस व्यक्तिगत यो गरिब मान्छे विशाल मदत गर्न के उहाँले सक्छन् बुझ्न कलर भ्रमण गर्नुभएको थियो।
को यात्रा को परिणाम, उहाँले शारीरिक स्वास्थ्य खातिर दाऊदले भारी बलिदान गर्न तयार छ कि पक्का रूपमा, िईद्भस Pauel स्मिथ लागि व्यक्तिगत वजन कार्यक्रम विकास भएको छ। वर्ष र आधा कोच समयमा हरेक दुई दिन उहाँको मित्र बन्न थियो मानिस आए। उहाँले दाऊदले खान खाना सान्त्वना खोजी छैन सिकाउनुभयो अनि साँझ थकित कसरत सम्म बिहान देखि उहाँलाई लगे।
केही महिना धेरै वर्ष घर बाहिर जाँदै छैन लागि मानिस, एक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्षम थियो। यो सबै को पहिलो उहाँले चालक सिटमा फिट गर्न सक्षम थियो भन्ने तथ्यलाई गर्न सम्भव धन्यवाद गरिएको थियो। साथै, उहाँले उच्च विद्यालय स्नातक र काम गर्न गए।
अठार महिना पछि, मानिस मात्र 101 किलो वजन, तर आफ्नो शरीर अझै पनि एक दुःखी दृष्टि छ - सबै पक्ष बाट झुन्डिएको छाला को hideous Folds। टेलिभिजन धन्यवाद, दाऊदको कथा देश थाह थियो, र डाक्टर अतिरिक्त छाला को छुटकारा प्राप्त गर्न दान सञ्चालन गर्न उहाँलाई सोधे। चार सञ्चालन र पुनःस्थापना नयाँ को छ महिना पछि, पूर्ण पहिचान गर्न नसकिने स्मिथ दर्शक र प्रशंसक अघि देखा पर्नुभयो।
आज दाऊदले कसैलाई पनि गहिरो खाल्टो आफूलाई बाहिर क्रल गर्न ल्याउन सक्छ भनेर भन्छन्। यो कि उसले आफूलाई धेरै वर्ष पहिले नै धरापमा भएका अरूलाई मद्दत गर्छ।
Kris Pauell विभिन्न कार्यक्रमहरु भाग, वजन खोने एक पुस्तक लेखन, धेरै कार्यक्रम छ। उहाँले सबै भन्दा प्रसिद्ध फिटनेस trainers अमेरिका को एक मानिन्छ। हाम्रो देश मा सबै भन्दा प्रसिद्ध परियोजना यसको कार्यक्रम मार्फत छ "वजन चरम हानि।"
यो श्रृंखला प्रत्येक कार्यक्रम एक धेरै बोसो मानिसलाई समर्पित छ। एकल वर्ष व्यक्तिहरूको titanic प्रयासको फलस्वरूप सबै, वजन खोने छ सामान्य आकार प्राप्त। आहार, व्यायाम, र उच्चतम र प्लास्टिक सर्जन को काम, र मनोवैज्ञानिक को सहयोग: मार्गमा सबै छ। कार्यक्रम को सहभागी हटाउन धेरै आन्तरिक बाधाओं, आफैलाई साबित गर्न भनेर पर्याप्त आकार को एक स्वस्थ शरीर - एक लक्जरी। यो सबैका लागि उपलब्ध छ।
छैनन् तपाईंको आफ्नै क्षमता मा विश्वास गर्नेहरूले तपाईं निश्चित को स्थानान्तरण हेर्नुपर्छ "वजन चरम हानि।"
एक स्लिम र स्वस्थ शरीर छ चाहन्छ जो कोहीले पछि गर्न सकिन्छ कि टेलिभिजन कार्यक्रम कोच साझेदारी सल्लाह को एक किसिम मा।
5 मिनेट चलाउन एउटा प्रतिज्ञा दैनिक दिइएको, 10 पटक, दायाँ खाना खान बाहिर wrung। मुख्य कुरा - यी प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न।
यो तरल पदार्थ प्रशस्त पिउन आवश्यक छ।
चिनी कम से कम एक भोजन एक दिन देखि हटाइनु पर्छ। यसलाई सरल छ, तर यो काम गर्दछ।
कुनै सोडा। नास्ता दैनिक, साथै व्यायाम।
सर्विंग्स को आकार। Kris Pauell, प्रसन्न हुन्छ जो प्रक्रिया स्लिमिङ, प्राय तर सानो अंश खाने सल्लाह दिएको छ।
समर्थन छ। परिवार, साथीहरू, छिमेकी र परिचितहरू पत्राचार गरेर - यो छ जो कुरा छैन। तर सँगै कुरा गर्दै सधैं सजिलो छ।
कल्पना गर्नुहोस्। यो गर्न, तस्बिरहरू जसको लागि सबै सुरु भएको थियो छवि सम्मिलित जसमा लागि एक सरल तस्वीर फ्रेम किन्न आवश्यक छ। एक पातलो छाँयामा फोटो पर्याप्त कसैले कसैको फोटो चाहेको बच्चा - सबैलाई आंकडा गर्न आफ्नै कारण छ।
सही प्रेरणा र एक मित्र, कठिन क्षणमा समर्थन गर्न सक्षम हुनेछ जो फेला पार्न - kris Pauell काम गर्न निश्चित प्रत्येक व्यक्ति, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
कसरी पातलो तातियाना Tarasova - प्रसिद्ध आंकडा स्केटिङ कोच
व्यायाम बाइक: कसरी वजन गर्न सामना गर्न? कार्यक्रम र प्रशिक्षण परिणाम
विवरण र टिप्पणीहरू: "Megaslim" - पातलो दाना
काँचो खाना आहार: लाभ र हानि
Nizhny Novgorod मा रेस्टुरेन्ट "Maximilian"
"Laktofitol": समीक्षा र हर्बल चिया प्रयोग विशेषताहरु
ककटेल "Pinakolada": पौराणिक ककटेल नुस्खा
एक छुट्टै विभाजन - यो के हो? एक छुट्टै विभाजन: आकार, रूप र दर्ता
राज्य Andorra - को Pyrenées को काखमा किनारा
शून्य संग रिच तुरुन्तै कसरी प्राप्त गर्न
पाँच-तारे क्लब होटल "Majestic बीच क्लब" (Kemer, टर्की): वर्णन, कोठा र पूर्वाधार संख्या
कसरी र सास कत्ति wheezing उपचार गर्न?